နီပေါနိုင်ငံ၌ ရေကြီးရေလျှံမှု ၊ မြေပြိုမှုများကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၁၀၁ ဦးထိ ရှိလာ ၊ လူပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော်အား ဘေးလွတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ - Xinhua News Agency
ခတ္တမန္ဒူ ၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
နီပေါနိုင်ငံ၌ အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ နှင့် မြေပြိုကျမှုများကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်သည် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ၁၀၁ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး အခြား လူ ၃၅ ဦးမှာ ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် လူ ၄၀ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကောက်ပဲသီးနှံ နှင့် ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“လတ်တလောမှာ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် သက်သာရေး လုပ်ငန်းတွေအပေါ် အဓိကထားပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းချက်ကို နောက်ပိုင်းမှ လုပ်သွားပါမယ်။”ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဘေးအန္တရာယ် နှင့် ပဋိပက္ခ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန အကြီးအကဲ Hum Kala Pandey က ဆင်ဟွာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရိုင်အသီးသီးမှ လူပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုလအစောပိုင်းတွင် မုတ်သုန်မိုး နောက်ဆုတ်သွားပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် စတင်ရွာသွန်းခဲ့သည့် အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းရှိ ပြည်နယ် ၁ နှင့် အနောက်ပိုင်းရှိ Sudur Paschim နှင့် Karnali ပြည်နယ်များ ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဌာန အကြီးအကဲ Hum Kala Pandey က ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများ မရှိတော့သဖြင့် ယခုမှစ၍ ထပ်မံဆုံးရှုံးမှုများ ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
နီပေါနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Sher Bahadur Deuba သည် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် Sudur Paschim ပြည်နယ်ရှိ Bajhang နှင့် Kailali ခရိုင်များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ချက်ချင်း ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် သက်သာရေး လုပ်ငန်းများအား စတင်ရန် ဒေသတွင်း တာဝန်ရှိသူများအား ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း နှင့် စပါးဆုံးရှုံးခဲ့သည့် လယ်သမားများအား ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်တစ်ခုအား ကတိပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွင်း နီပေါရူပီး ၁၀ ဘီလီယံ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၃ သန်း) တန်ဖိုးရှိ စပါးများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆုံးရှုံးမှုတွေအပေါ် အစီရင်ခံစာ ကောက်ယူမှုတွေ စလုပ်နေပါတယ်။”ဟု ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Prakash Kumar Sanjel က ပြောကြားခဲ့ပြီး အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို သိရှိဖို့ ရက်အနည်းငယ် ကြာလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။
နီပေါနိုင်ငံ အစိုးရသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသွားသည့်သူများအား တစ်ဦးလျှင် ရူပီး ၂၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၁,၆၆၇) ထောက်ပံ့ရန် နှင့် မိသားစုဝင် တစ်ဦးထက်ပို၍ သေဆုံးသူများအား ရူပီး ၁၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၈၃၃) အပိုဆောင်းထောက်ပံ့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည့် အိမ်ထောင်စုများအား အစိုးရက ရူပီး ၃၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀) နှင့် ရူပီး ၅၀၀,၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၄,၁၆၇) အကြား အကူအညီအထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Death toll up to 101 from floods, landslides in Nepal, over 4,000 evacuated
KATHMANDU, Oct. 21 (Xinhua) — The death toll from floods and landslides sparked by unseasonal rainfalls in Nepal has risen to 101 by Thursday evening, with 35 others still missing.
The rain-induced disasters have left 40 people injured and causedahuge loss of crops and properties.
“We are currently focusing on rescue and relief operations. The estimate of the losses of properties will be done later,” Hum Kala Pandey, chief of the Disaster and Conflict Management Division under the Ministry of Home Affairs, told Xinhua. “We have evacuated over 4,000 people to safe places from different districts.”
Pandey said the unexpected downpours that started on Monday after the monsoon receded early this month had hit Province 1 in eastern Nepal and Sudur Paschim and Karnali Provinces in the west hard in particular.
“There was no heavy rainfall on Thursday, therefore we are expecting there won’t be further loss from now on,” he added.
Nepali Prime Minister Sher Bahadur Deuba visited Bajhang and Kailali districts in Sudur Paschim Province on Thursday, and he directed local authorities to launch prompt rescue and relief operations and promisedarelief package to farmers who lost their paddy.
According to an estimate by the Ministry of Agriculture and Livestock Development, paddy worth 10 billion Nepali rupees (8.3 million U.S. dollars) has been destroyed in the disasters.
“We have started to collect reports on the losses,” said Prakash Kumar Sanjel, spokesperson for the ministry. “It will take some days to find out the actual losses.”
The Nepali government has decided to provide 200,000 rupees (1,667 dollars) to each family that has lostamember in the disasters, and an additional 100,000 rupees (833 dollars) to families losing more than one member.
For families who lost houses, the government offers an aid ranging between 300,000 rupees (2,500 dollars) and 500,000 rupees (4,167 dollars). Enditem
Photo – Photo taken on Sept. 6, 2021 showsatruck inaflooded area after incessant rainfall in Kathmandu, Nepal. (Photo by Sulav Shrestha/Xinhua)
နီပေါနိုင်ငံရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအောက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်